उखुको जुस पिउने गर्नुभएको छ? यस्ता कुरामा ध्यान नदिए बेफाइदै बेफाइदा
असोज २२, २०७४| प्रकाशित १४:४२
गर्मीका बेला हामी प्रायजसो उखुको रस पिउँछौं। यसले आँतलाई शीतल बनाउँछ। यसका कैयौं फाइदा छन्। जण्डिसको समस्या छ भने पनि यसले निकै फाइदा गर्छ। गर्भवती महिलाका लागि यो उत्कृष्ट पेय हो। यति मात्रै नभई यो डिहाइड्रेसनबाट बचाउन रामवाणसिद्ध हुन्छ। एनिमिया, क्यान्सर लगायतका रोगमा पनि उखुको रस लाभदायी हुन्छ। तर यसको अर्थ उखुको रस हरसमय फाइदाजनक हुन्छ भन्ने होइन। उखुको रस कहाँ पाइन्छ भन्ने कुराबाट पनि लाभ र हानि तय हुन्छ।
तपाईं उखुको रसको सौखिन हुनुहुन्छ भने पाएसम्म पिउनुहुन्छ। तर फलफूल पसल र रस पेल्ने मेसिन कत्तिको सफा छ भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। पसलमा झिँगा भन्किइरहेको हुन सक्छ। त्यस्तो स्थानमा सकेसम्म जुस पिउनुहुन्न।
सम्भव छ भने पेलेको उखु कत्तिको स्वस्थ छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। सडेको उखुले स्वास्थ्यमा फाइदाको साटो हानि गर्न सक्छ। यस्तो उखुले पेटको समस्या पनि पैदा गर्न सक्छ। किरा लागेको उखुको जुस परेको छ भने बान्ताजस्ता समस्या निम्तन पनि सक्छन्।
फ्रिज गरेको जुस
उखुको रस ताजा पिउने हो भनेमात्र फाइदा हुन्छ। यदि फ्रिजमा राखेको जुस छ भने यसले राम्रो गर्दैन। बासी जुसमा झिँगा पनि बसेको हुन सक्छ। किरा लागेको हुन सक्छ। यसैले पसलबाट उखुको जुस खानुछ भने तत्काल पेलेको ताजा जुसमात्र पिउनुस्।
अन्य रसको मिश्रण
उखुको रसमा अन्य जुस मिलाइएको छ छैन भनेर याद गर्नुपर्छ। उखुको रसमा कुनै फल या तरकारी मिसाइएको हुनुहुन्न। कैयौं पसलमा जुसका साथ पानी पनि मिसाइएको हुन्छ। यद्यपि पानी मिसाउनु त्यति हानिकारक होइन। तर स्वादमा भिन्नता आउँछ।
अधिकतम २ गिलास
उखुको रस स्वादिलो भएकाले पिउने हो भने जति पनि पिउन सकिन्छ। झट्ट हेर्दा यसबाट कुनै नोक्सानी हुँदैन। तर धेरै पिउनु गलत हो। विशेषज्ञका अनुसार एक दिनमा दुई गिलासभन्दा बढी उखुको रस पिउनुहुन्न। यदि जण्डिस छ भने मात्रा बढाउन सकिन्छ। धेरै उखुको रसले नोक्सानी पुर्‍याउन सक्छ।
सडकमा राखिएको मेसिनमा पेलेको रस पिउँदा संक्रमण हुने खतरा हुन्छ। किनभने त्यो फोहोर हुन्छ र धुलोमाटोयुक्त हुन्छ। यस्तो जुस पिउँदा पेटमा समस्या पनि हुन सक्छ।
उखुको रस पेल्ने मेसिन चलाउन प्रायजसो विशेष किसिमको तेल प्रयोग हुन्छ। यदि यस्तो तेल पेटमा गयो भने त्यसको नराम्रो असर पर्न सक्छ। मेसिनमा तेल प्रयोग कम गरिएको स्थानमा बनाइएको जुस मात्र पिउने गर्नुपर्छ।
विवाहमा केटा-केटीकाे कति उमेर फरक राम्रो ?
मोटोपना घटाउन कस्तो खानपान र जीवनशैली अपनाउने?
नकारात्मक सोचले कसरी रोग निम्त्याउँछ ?
आफूलाई ‘ठूलो मान्छे’ ठान्ने रोग के हो ? उपचार के छ ?
डा उपेन्द्र देवकोटाको निधन
बेल्जियमको उत्कृष्ट सुरुवात, लुकाकुको २ गोलमा पानामामाथि हाबी
बाबुराम भट्टराईले यसरी सम्झिए डा देवकोटालाई
डा देवकोटाप्रति प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त
गुप्तचरका १० एसपीको एसएसपीमा बढुवा
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक २५ वर्षपछि काठमाडौं बाहिर, जिल्ला सभापति भेलाको तयारी पूरा
गोल्छा अर्गनाइजेसनमा २८ लाखको चोरी, अभियुक्त पक्राउ
स्विडेनको विजयी सुरुवात, कोरियालाई भिएअार महँगो साबित
हेटौंडामा सुरु भयो कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक
नेपाल प्रहरीका ५० डिएसपीको सरुवा(सूचीसहित)
नेविसंघ स्याङ्जा-काठमाडौं सम्पर्क समितिको नेतृत्वमा दीपेन्द्र क्षेत्री
जर्मनीविरुद्ध खेलेर मेक्सिकोका राफाले बनाए कीर्तिमान
क्रोएसियाले नाइजेरियालाई हरायो, जितमा मान्जुकिकको केन्द्रीय भूमिका
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मूलाबारीसम्म केवलकार सञ्चालनमा आउने
सरकारी जागिर खाएर बढुवाका लागि पढिरहने बानी राम्रो होइन : मन्त्री पण्डित
जोतारे धाइबा (संयोजन)
News Section: +977-1-4238056
Account : +977-1-4238056